Soomaalidii caanka ahaa ee sanadkan u dhintay Coronavirus | Aftahan News
Soomaalidii caanka ahaa ee sanadkan u dhintay Coronavirus
December 31, 2020 | Filed under: Wararka | Posted by: MMC FARADHEERE
Hargeysa (Aftahannews)- Iyadoo uu sii galbanayo sanadkan 2020-ka oo uu dunida saameyn ba’an ku yeeshay xanuunka coronavirus, waxaa gudaha Soomaaliya iyo meelo kale oo adduunka ka tirsanba ku geeriyooday Soomali badan oo caan ahaa.
Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde), oo Soomaaliya ka soo noqday Ra’isal wasaare muddadii u dhaxeysay November 2007 illaa Febraayo 2009 ayaa 1-dii April ee sanadkan 2020 wuxuu isbitaal ku yaalla magaalada London ee dalka Ingiriiska ugu geeriyooday cudurka Covid19.
Nuur Cadde wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho 2-dii February 1938-kii. Waxaa lagu xusuustaa kaalintii uu ka qaatay shirweynihii dib u heshiisiinta Jabuuti ee sanadkii 2009-kii ee lagu dhisay dowladdii wadaagga aheyd ee uu qaybta ka ahaa isbahaysigii dib u xoreynta ee fadhigiisu ahaa magaalada Casmara ee dalka Eritrea.
Waxaa kale oo uu gacan siiyey xornimo doonkii Jabuuti.
Wuxuu ahaa shakhsi aad uga dhex muuqday bulshada Soomaaliyeed ee London oo uu xubin firfircoon ka ahaa.
Wuxuu ahaa madaxa xidhiidhka dibadda iyo suuqeynta ee xidhiidhka kubadda koleyga Soomaaliya.
Waxaa kale oo uu xubin ka ahaa xidhiidhka ciyaaraha basketball-ka Afrika.
Isbitaal ku yaalla magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayuu weriyihii rugcaddaaga ahaa ee Cabdulqaadir Maxamed Mursal 31-kii September ugu geeriyooday xanuunka coronavirus,.
Wuxuu ka soo shaqeeyay wargeyskii Xiddigta October, isagoo qoraallo ku qori jiray. Waxaa kaddib loo qaatay farshaxaniiste hibo leh isagoo sawir gacmeedyo ku daabici jiray wargeyska. Sida ay sheegeen qara ka mid ah dadkii ay isla soo shaqeeyeen wuuxu ahaa qofkii ugu horreeyay ee bilaaba sawir-gacmeedyada kuna daabaca wrageys, isagoo xaaladda uu dalka ku jiro hadba ku muujin jiray.
Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cali Khaliif Galaydh ayaa 8-dii Oktoobar ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya.
Mas’uuliyiinta Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in baadhitaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Cali uu u dhintay fayraska korona.
Hase yeeshee, ehellada marxuumka ayaa codsaday in dib loo baadho waxa geeridiisa sababay.
1980-kii ilaa 1982-kii wuxuu soo ahaa Wasiirkii Warshadaha ee dowladdii kacaanka, oo uu madaxweyne ka ahaa Maxamed Siyaad Barre.
Ka hor inta aan loo magacaabin xilka Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya, sanadkii 2000, wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaankii lagu yagleelay shirkii Carta.
13 bilood markii ay dhisneyd xukuumaddii uu Ra’iisal Wasaaraha ka ahaa, xildhibaannada baarlamaanka ee xilligaas ayaa kala noqday codka kalsoonida.
Cabdi cali Bacalwaan ayaa ka mid ahaa tiirarkii kooxda qaranka ee Hoballada Waabari. Mar uu wareysi siinayay mid ka mid ah warbaahinta, sanadkii hore ayaa wuxuu yidhi “Qaran dumay qalfoofkii ka haray inaan ahay” ayaan dareemaa markaan soo xusuusto heerkii uu fanku gaadhay”.
Bacalwaan mar uu wareysi siinayay mid ka mid ah warbaahinta Soomaalida wuxuu sheegay inuu fanka soo galay sanadkii 1965, isagoo kaalinta koowaad ka galay tartan faneed lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Wuxuu ku biiray kooxdii Xoogga Dalka, isagoo markii dambe ka mid noqday Hoballada Waaberi oo safka hore kaga jirtay fankii Soomaalida.